कतै हामी तरकारीको नाममा बिष त खादै छैनौं ? आलु खाँदा ख्याल गर्नुस्, ! सबैको जानकारीको लागि शेयर गरौं । | YesKhabar
कोरोनाबाट बच्न मोरिंगा, गानोडर्मा, जिन्सेन, जिंकोबाइलोबा, यार्सागुम्बामध्ये जे जे पाउनुहुन्छखोजी खोजी सेवन गर्नुहोला -डा.पाण्डे
कोरोनाको संकटकै बेला विश्वमा थपिए अन्य खतरनाक रोग
आज जेष्ठ कृष्ण औंसी, भुलेर पनि नगर्नुहोस् यी १० काम
असई कार्कीको शव पोष्टमार्टम गर्न लगियो
सात हप्ता सम्म लिङ्ग उत्तेजित भएपछि अस्पताल
कतै हामी तरकारीको नाममा बिष त खादै छैनौं ? आलु खाँदा ख्याल गर्नुस्, ! सबैको जानकारीको लागि शेयर गरौं ।
२०७६ साल आश्विन ४ गते, शनिबार १०:४७ AM
Total Share : 989 Total Views :7K
आलु भान्सामा अनिवार्य रुपमा पाइने परिकार हो । आलु, अन्य सागसव्जी, तरकारीमा मिसाएर मात्र नभइ तरकारी बनाएर उसीनेर तारेर आदी विभिन्न तरिकारले पकाउन सकिन्छ ।विश्वभर नै आलुको बढी प्रयोग हुने गरेको छ । अझ नेपाल र भारत लगायतको देशमा त यसको उत्पादन तथा उपभोग बढी हुने गरेको छ । आलूलाई भण्डारण गरेर राख्ने गरिएको छ र यसलाई आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्ने गरिएको छ । तर यसरी भण्डारण गरिएको आलु प्रयोगले त्यति फाइदा भने पु-याउँदैन । यस्ता केही आलु छन् जसालई प्रयोग गर्दा त्यसले नकारात्मक असर पर्छ ।
चाहुरि परेको आलु=लोमो समय राखेको आलुमा रहेको पानीको मात्र नष्ट भएसँगै आलु चाहुरिन पुग्छ । जसलाई विउको रुपमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ । आलुलाई धेरै समय राखेरपछि त्यो चाहुरिन्छ, त्यसको टुसा उर्मन थाल्छ । यसैलाई बिऊको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यस्तो आलु सेवन गर्दा हानी पुग्छ । यस्तो चाउरी परेको आलुको सेवन गर्दा शरीरमा वि’षाक्त पदार्थ प्रवेश गर्छ ।हरियो रंग=बजारमा खरिद गरेको बेला होस् वा सब्जी बनाउने बेला, बोक्रामा हरियो हुँदै गएको आलु सेवन नगरौं । लामो समय राख्दा पनि आलु हरियो हुँदै जान्छ । यस्तो आलुको हरियो भाग काटेर प्रयोग गर्नुपर्छ । आलुको हरियो भागमा सेलेनाइन वि’षाक्त पदार्थ हुन्छ ।
टुसा आएको आलु=आलुलाई लामो समयसम्म भण्डारण गरेपछि त्यसमा टुसा अंकुराउन थाल्छ । अक्सर यस्तो आलु रोप्नका लागि उपयोगी हुन्छ । तर, हामी टुसा अंकुराएको आलु सेवन गर्छौ, जो स्वस्थ्यकर मानिदैन ।यसो गर्दा पुग्छ फाइदा=आलु स्वादिलो र बहुउपयोगी परिकार मात्र होइन, स्वस्थ्यवर्द्धक पनि हुन्छ । आलुमा भिटामिन सि, बि कम्पलेू्रक्स तथा आइरन, क्याल्सियम, म्याग्नेसियम, फस्फोरस तत्व हुन्छ । यदि आलुलाई उसिनेर बोक्रासँग सेवन गर्दा यसमा रहेको पोषक तत्व नष्ट हुँदैन ।
भारतमा दुई महिनापछि सुरु भयो आन्तरिक उडान
थप ७२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, नेपालमा संक्रमित संख्या ६७५ पुग्यो
भक्तपुरमा सामूहिक बलात्कार, एक जना पक्राउ
घरघरमै नमाज पाठ गरी इद उल फित्र मनाइँदै
लकडाउनकाबीच भारतमा आइतबार धेरै जोडीको विवाह
स्थानीय तह सीमामा अलपत्रलाई उद्धार गर्दै
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पीसीआर जाँच सुरु
सोमबार थपिएका संक्रमितमध्ये प्रदेश २ का ५४ जना
टोखाका कोरोना संक्रमित पुरुष किराना पसले
राति निन्द्रा पर्दैन ? आधा कागतीले समाधान गर्नेछ अनिन्द्राको समस्या
फिट र टेन्सन फ्री रहनका लागि डान्स
यस वर्ष मनसुनमा मुलुकभर औसत वर्षा हुने प्रक्षेपण
जसले निजी गाडीलाई एम्बुलेन्स बनाएर बिरामी ओसार्थे, उनैलाई कोरोना संक्रमण
पहिलो पटक मस्जिद सुनसान
कोरोना संक्रमणबाट चौथो व्यक्तिको मृत्यु, मृत्युको ८ दिनपछिमात्र कोरोना पुष्टि